ASA SOSIALY : Nitsangana eto Antsirabe ny fikambanana mpanao asa soa A.S.V.F.M.A
Miroborobo ny fijoroan’ny fikambanana mpanao asa soa manerana an’i Madagasikara sy ny Faritra rehetra mihitsy. Ny harefoan’ny fiainam-bahoaka no mahatonga azy ireny hiroborobo. 11 janvier 2017
Mahatsapa ireny fikambanana ireny fa miaina ao anaty fahasahiranana lalina ny vahoaka, ka tsy mahita vahaolana ny mpitondra no antony satria tokony ho ny fanjakana no hisahana izany.
Amin’izao fotoana dia nitsangana eto Antsirabe ary nampahafantarina ny alahady 08 Janoary 2017 lasa teo ihany koa fikambanana A.S.V.F.M.A na ny « Association Sœur Vonjy France Madagascar Antsirabe », izay fikambanana efa miasa amina renivohim-paritra hafa eto Madagasikara toa an’i Mahajanga sy Toamasina ary Antananarivo ka izao nijoro eto Antsirabe izao koa.
Tsy misy idiran’ny resa-pinoana ity fikambanana ity fa mikasa ny hisahana ny fanampiana ny fianakaviana no tena tanjon’ny fikambanana ary ny hiompana amin’ny lafiny fanabeazana sy fahasalamana ary ny tontolo iainana izany.
Raha ny fanazavana nomen-dRtoa Sepiere Mauricette Tiaray Andriamasinavalona, tompon’andraikitra eto Antsirabe dia tsy hizara zavatra akory no iorenan’ny fikambanana fa hampianatra ny ankizy amin’ny lafiny fahasalamana sy tontolo iainana. Nambarany ny fisian’ny fikambanana “Vonjy”, niorina tany Frantsa tany, izay niara-niasa tamin’ny teratany frantsay ka naniry ny hanitatra izany manerana an’i Madagasikara mba hisahanana ny zanaka malagasy ka dia izao izy najoro eto Antsirabe izao izany.
Nambarany fa hisy ny fidinana ifotony ataon’ny fikambanana amin’ny fifantenana ireo kilonga tena mila fanampiana eny anivon’ny fianakaviana misy azy, mialoha ny hisian’ny fanohanana azy ireo raha ny nambaran’ity filoha mpanorina ny ASVFMA ity ihany.
Ankoatra ireo kilonga izay hotohanana eo amin’ny lafiny fianarana dia hisy ihany koa ny fanampiana ireo Ray aman-dreny amin’ny lafiny fivelomana, ka vao eo am-pandrafetana izany ireo tompon’andraikitra satria ny tanjona dia ny hampahaleo tena tanteraka ny fianakaviana.
Nisy ny fanohanana manokana nomena ireo mpikambana nandritra ny hetsika fampahafantarana ny fijoroan’ny fikambanana, nataon’ireo mpikambana sy mpanohana avy any ivelany, tao amin’ny sekoly ambony ESSVA Miaramasoandro.